Zụrụ 2-Aminoisoheptane (28292-43-5) HPLC≥98% | AASraw
/ ngwaahịa / ndị ọzọ na- / 2-aminoisoheptane (28292-43-5)
4.50 si 5	dabere na 2 ahịa Fim
SKU: 28292-43-5. Category: ndị ọzọ na-
AASraw nwere ikikere na mmepụta ikike site na gram ka usoro nchịkọta nke 2-Aminoisoheptane (28292-43-5), n'okpuru usoro CGMP na usoro nlekọta njikwa.
2-Aminoisoheptane, nke a makwaara dị ka DMHA ma ọ bụ Octodrine, aghọwo ihe na-ewu ewu na-arụ ọrụ tupu oge mmalite nke 2017. Ọ bụ ihe na-akpali akpali nke ekwenyere iji melite ogo ume gị .2-Aminoisoheptane dịka DMAA. A na - ahụ ya n'ime ogbugbo nke Igbo Walnut Tree (AKA Juglans Regia) ....
2-aminoisoheptane isi Characters
Molekụla Formula: C7H17N
Ọbara arọ: 115.22
Aha Mmiri: 2-aminoisoheptane
Aha aha: DMHA, Octodrine
2-Aminoisoheptane, dị ka ihe ọhụrụ na-eme ka a na-emegharị ihe na mgbakwunye ihe mgbakwunye na abụba. Nke a nile bụ n'ihi ntụgharị uche ya abụọ a tụrụ atụ nke ume na ume na-egbochi agụụ.
Enwe Uru Ume Ike
2-aminoisoheptane (Octodrine) na - enweta ngwa ngwa maka ike ya na ume ya. Nke a emeela ka ọ bụrụ ihe a na-ewu ewu dị ka mgbakwunye preworkout ebe o nwere ọtụtụ àgwà na-eme ka ị nweta ọtụtụ n'ime mgbatị gị: mee ka ike gwụ gị (mee ka ọ dịkwuo mfe ịkwali onwe gị na ịkwagharị ọzọ, nke pụtara ka calorie ndị ọzọ na-ere ọkụ)! (otutu ume anaghị apụta ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na ịnweghị ọchịchọ ịchọta ọrụ), na ọnọdụ dị mma (mgbe ọ dị gị mma n'oge na mgbe ị na - arụ ọrụ - ọ ga - eme ka o yie ka ị ga - alaghachi ma mee ya niile ọzọ). Ụfọdụ uru ndị ọzọ na - agụnye nhụjuanya dị ukwuu nke ịnagide 5,6, ọnụego mbelata nke 5,6b, na-emewanye 3b bronchodilation, 4b, 5b - nke na - abata n'aka mgbe ị na - ebuli ihe dị arọ, na - emegharị site na klọb ma ọ bụ HIIT, ọrụ.
Otu n'ime akụkụ kachasị mma banyere 2-aminoisoheptane (Octodrine) bụ na uru ndị a na-eji ngwa ngwa na-ekele ngwa ngwa ya. Ihe mgbakwunye nke otu akụkụ methyl na alpha carbon na-eme ka ụdị amphiphilic nke onyinye ahụ - nke na-eme ka ọ bụrụ mmiri soluble na lipid soluble. Ọnụ ọgụgụ nke lipid solubility abawanye ụba na-eme ka ikike ya nwee ike ịgafe site na mgbochi ụbụrụ ọbara ebe ọ na-enwe ike itinye mmetụta ya na-elekwasị anya na mmụba euphoric.8,9
Enweghi uru uru
2-aminoisoheptane (Octodrine) nwekwara ike inyere aka belata mbido ọnwụ n'ihi ike ya iji belata agụụ na-eme ka ọnọdụ gị dịkwuo mma site na ịba ụba hormones nke na-eme ka ị "nwee obi ụtọ" 4b, 5b (na-ekwu na ọ dị mma ịbịakarị sessions nke nrụgide na obi ala!).
Nkọwawanye nke ọnọdụ 2-aminoisoheptane (Octodrine) na-enye aka na-eme ka ọganihu dopamine na norepinephrine, bụ ndị na-ahụ maka euphoria na-amụba na wakefulness.3b, 4b, 5b, 6b. Dịka nke a na-ejikọta ya na ndị monoamine neurotransmitters, 2-aminoisoheptane (Octodrine) nwere ike ime ka amine metụtara onye natara 1, mgbe ọ na-egbochi reuptake dopamine na norepinephrine n'ime akwara presynaptic - meziwanye ikike ya "na punch".
Tụkwasị na nke a, ndị ọrụ nke DMHA ekwuwo ọnụ ụzọ mgbu dị elu ma belata ike ọgwụgwụ, si otú ahụ na-enye ndị ọrụ aka inweta uru kachasị elu site na mgbatị ha .2-aminoisoheptane (Octodrine) na-akwalite mkpali ime ihe. Dika o kwuworo, DMHA na-akpata ntọhapụ nke dopamine. Mkpụrụ ndụ nke Dopamine na-emetụta ọkwa na-akpali akpali na nsụgharị ọzọ. Mkpali bu ochicho ime ihe mgbe ichota bu nkwa. Mmadụ nwere ike ịchọta ihe, ma ọ bụrụ na ha na-enwe nsogbu na ụzọ, mgbe ahụ ha nwere ike ịda mbà. Otú ọ dị, ọ bụrụ na mmadụ enwee obi ụtọ, mgbe ahụ, ha agaghị agbapụta ihe kpatara ya ruo mgbe ha mezuru ihe ha ga-eme. Obi dị m ụtọ, dopamine, onye ntọhapụ ya kpatara site na iri nri nke DMHA, jide n'aka na ị nwere ma mkpali na mpịakọta iji mezuo ihe mgbaru ọsọ gị.
Nchikota utịp dị na mgbe ị na-eji DMHA enye nkwado kachasị maka mgbatị, n'ihi ya ọnụ ọgụgụ ya na-abawanye na arụmọrụ dịgasị iche iche, ihe mgbakwunye na ihe ọṅụṅụ.
Kedu ụdị usoro nke 2-aminoisoheptane
Enweghi nkwenye na-edozi maka ọrụ a. Ọ na-esikwa ike ịkọwa ole ụlọ ọrụ ndị a na-akpali akpali na-eji ebe ọ bụ na e jikọtara ya na ngwaahịa ahụ. Otú ọ dị, ọ nwere ike ịbụ nzọ dị mma itinye ihe n'etiti 100 na 300mg.
Cheta na 2-aminoisoheptane nwere ike iji tupu mgbatị, ma enwere ike iji ya na ụbọchị. Ebe ọ bụ ihe na-akpali akpali, gbalịa izere iji ya tupu ị lakpuo ụra n'ihi na ọ nwere ike imebi ụra nke ụra gị.
Iji jiri ọrụ mmezi nke 2-aminoisoheptane (DMHA) mee ihe, a na-eji ya eme ihe nke nta ka 15-30 nkeji tupu ịrụ ọrụ. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ejiri ya mee ihe maka ihe ndị na-egbochi ya na-eri nri, 2-aminoisoheptane (DMHA) nwere ike iji ya n'ụbọchị ehihie. Otú ọ dị, anyị na-atụ aro ịkpachara anya ma ọ bụrụ na ị na-eji nke a ngwa ngwa n'ehihie ma ọ bụ ná mgbede, n'ihi na ọ nwere ike igbochi gị ike ihi ụra.
Otú 2-aminoisoheptane si arụ ọrụ
2-Aminoisoheptane (DMHA) na-arụ ọrụ n'ụzọ yiri nke ahụ na DMAA a ma ama. Site na nlele ihu na ihu, mmekọrịta 2-Aminoisoheptane (DMHA) na-eme ka a mara dị ka ndị na-ahapụ ndị otu monoamine. Ndị a bụ ogige ndị nwere ike ịba ụba nke ụfọdụ monoamines. Ndị a bụ dopamine na noradrenaline. Ọ na-arụ ọrụ site n'ịkwalite dopamine na noradrenaline na-ebute ya mgbe ọ na-eme ngwa ngwa na-alaghachi azụ site na ịmekọrịta nke onye amịkọrọ amine njikọta. Nke a na-egbochi ikike ha nwere ike inweta ndị nabata ha na-edebe ihe ndị a na-arụ ọrụ. Ọ bụ ya mere i ji nwee ọganihu na-adịgide adịgide karị. Ihe ọzọ a na-ahụkarị n'etiti DMAA na 2-Aminoisoheptane (DMHA) bụ mgbakwunye nke otu akụkụ methyl na alpha carbon nke na-egbochi mmetụta nke monoamine oxidase (MAO), na-eme ka ụdị amphiphilic nke ihe a mejupụtara, yana njikọta maka catecholamine transporters.What a pụtara na ọkara ndụ a ga-adị ogologo oge, ọ ga-agafe ihe mgbochi ụbụrụ ọbara dị mfe karị, ọ ga-enwekwa mmetụta nkwalite dị ukwuu karị.
Mmetụta ndị ọhụrụ kachasị ọhụrụ na-apụta na niche nhazi na 2016! Ọ bụ 2-aminoisoheptane, ihe DMAA kachasị ọhụrụ iji gbalite ume ma gbochie agụụ. Ọganihu nke afọ ọhụrụ nke Afọ Ọhụrụ aghọwo ihe na-elekwasị anya nke ọtụtụ puku ndị na-eme egwuregwu na ndị na-eme egwuregwu.
Nke a bụ mmetụta ndị pụrụ inwe na 2-aminoisoheptane:
Dypsnea (Nkwụsị nke Mgbu)
2-aminoisoheptane ụkọ ntụpọ
2-aminoisoheptane na-emetụta ihe ọ bụla
Ebe ọ bụ na 2-aminoisoheptane dị ọhụrụ n'ahịa oriri na-edozi ahụ, ọ dịghị ihe ọjọọ kpatara. Anyị nwere ike iji ya tụnyere DMAA. Mmetụta ndị a na-achọghị na-emetụta ya na akwa dosages nke 2-aminoisoheptane, dịka ọmụmaatụ, mgbatị obi dị elu, mgbali elu nke ọbara na ike iku ume. Dị ka ihe ọ bụla na-akpali akpali, ọ kachasị mma ịmalite iji mkpụrụ obi dị ala iji nweta ohere gị na nchebara echiche na mpaghara ahụ.
Otu esi zụta 2-aminoisoheptane si AASraw
2-aminoisoheptane Raw Powder Recipes
Dymethazine (DMZ) ntụ ntụ
Levothyroxine (T4) ntụ ntụ
gosiri 4.50 si 5
Norethisterone ntụ (68-22-4)